Maxay qabow u tahay habeennada cadcad? | Saadaasha Shabakadda
Tani waa wax ay taageerayaasha cirku si fiican u ogaan doonaan oo ay ogaan doonaan. Xaqiiqdii, waxaa lagu dabaqi karaa wakhti kasta oo sanadka ah. Habeen cad ayaa badanaa la socda hoos u dhaca heerkulka. Ka soo horjeedka waxa dhici kara saacadda ugu horreysa ee maalinta, haddii aan leenahay daruur dabool waxaan yeelan doonnaa jawi ka qabow marka aan la helin dabool daruur, waxaan yeelan doonaa kuleyl badan.
Sidii xalay oo kale, falaadhaha qorraxdu way yaraadaan, illaa inta dambe laga waayo, oo shucaaca infrared ee soo socdaa joogsadaan Haddii aan leenahay a cirka daruuro leh, shucaac ayaa ku xannibanWay ku adag tahay inuu baxo oo uu la socdo kuleylka. Taas bedelkeeda, ka maqnaanshaha daruuraha, waxay keenaysaa faafitaanka tan kuleylka iyo shucaaca, oo aan lahayn wax caqabad ah oo kaydin kara, waxay ka tagaysaa habeen qabow oo u sii jeedaa cir aad u cad oo xiddig leh.
Dhacdada maalintii iyo cidlada
Sidoo kale, inta lagu jiro maalinta, samaysanta daruurtu waxay ka hortagtaa shucaaca inuu dhex-galo heerka dhulka. Markay "isku dhacaan" daruuraha, way ku dhaafi waayaan dhammaantood. Tan waxaa sidoo kale loo yaqaan 'refraction', maadaama jihada raajada ay isbedeleyso iyadoo la marayo aalad ka duwan tan ay ka timid. Waxaa loogu yeeri doonaa falcelin, haddii markii ay isku dhacaan uu boodboodo oo uu jihada beddelo. Adigoon dhex galin iyaga, shucaac la'aantaani waxay yareynaysaa heerkulka maalinta. Haddii habeenkii daruurahaas la lumiyo, hoos u dhaca heerkulka ayaa sii muuqda.
Tusaale ahaan, taas lidkeeda waxaan arki karnay xagaaga. Maalin aad u cadceed badan, oo leh kuleyl daran, oo ay weheliso habeen daruuro, ayaa sababa in kuleylka la keydiyay si dhib leh loo baabi'in karo Markaa waxaan haysannaa mid ka mid ah habeennadii foosha xumaa ee ay hurdadu u noqotay odyssey. Taasi waa Saamaynta laba-geesoodka ah ee daruuraha ee heerkulbeegyada iyadoo kuxiran waqtiga aan joogno. Daruuraha maalinti waa qabow, habeenkiina waa kuleyl, maqnaashahooda maalintiina waa kuleyl, habeenkiina qabow.
Taasi waa sababta sidoo kale sababta kuleylka sare ee lamadegaanka maalintii, iyo kuwa habeennada qabow leh. Maaddaama aysan jirin daruuro weligood ah, waxay soo saartaa kuwa aad u sarreeya.
Wadada buuxda ee maqaalka: Saadaasha Shabakadda » Saadaasha hawada » Kala bixid » Maxay qabow u tahay habeennada cadcad?